2006 – 2008 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36065)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11212)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9928)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8255)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5886)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5854)
နေအိမ် → Benelli → 2006 - 2008 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
2006 – 2008 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
1 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2006 – 2008 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
First introduced in 2006, the first fully-faired Tornado (previous bikes were naked ones) was what everyone expected from the relatively small Italian manufacturer. The engine develops 120 KW at 10.500 RPM, definitely comparable with Japanese supersports (although we won’t do that, readabit more) ပြီးနောက် 124 မှာ nm 8000 RPM as well.
But the Aprilia RSV 1000 is determined not to lose its supremacy as the best sports twin money can buy and it constantly develops new technologies and systems to fit it. ဘို့ 2008, Aprilia RSV 1000 R remarks thanks to its Öhlins Racing fork with Titanium Nitride coated stanchions and radial caliper mountings, the latest generation V60 Magnesium Engine with Ø 33 mm exhaust valves, larger diameter exhaust headers and external catalytic converters, installed nearer to the header pipes for improved efficiency and environment respect. Asaresult, Benelli’s competitor also comes with Euro4homologation.
Its front end is characterized through the Y shape given by the screen and headlight, the mirrors representing an extension of that shape, apart from their obvious purpose. လည်း, the air scoops on the headlight’s sides give itadistinctive look, but if you are used to seeing R1s every day, that’s what you’ll be confusing it with.
The liquid-cooled four-stroke inline-triple hasn’t radically been modified and doesn’t even cry for it. Developing an impressive 160 မြင်းကောင်ရေအား, the motor isanever ending power source and also has the role of an MP3 player with the powerful beats coming from the exhaust. There is alsoalot of torque available (124 nm) and this makes it even more adequate for road use.
Type:3cylinders,4လေဖြတ်ခြင်း, liquid cooled, 12 Valves, DOHC (double overhaed camshaft)
ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ x ကိုလေဖြတ်: 88 x က 62
Intake Valve Diameter: 33 မီလီမီတာ
Exhaust Valve Diameter: 29 မီလီမီတာ
2013 Benelli လေဆင်နှာမောင်းအဝတ်အချည်းစည်း TRE1130R Specification,...
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2013 Benelli လေဆင်နှာမောင်းအဝတ်အချည်းစည်း TRE1130R Specification, စျေးနှုန်းနှင့်ရုပ်ပုံ …
2009 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 Motorcycle Review &#...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Benelli လေဆင်နှာမောင်း Tre 1130 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Benelli Tornado 1130
အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ 1970 အပျော်စီးသင်္ဘော MV Agusta 750S အမေရိကတိုက်, Moto Guzz...
17.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ 1970 အပျော်စီးသင်္ဘော MV Agusta 750S အမေရိကတိုက်, Moto Guzzi 750S, Benelli 750…
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Tuner Tuesday: Anti-AMGs? Lorinser and Zender R107 SLs German Cars For…
15.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Arai Helmets introduces Limited Edition 2014 Isle of Man TT Races Helmet
14.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Streetfighter Comparison: 2010 Ducati Streetfighter vs. 2008 Benelli…
13.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition – 2002
စမတ် eScooter Bajaj Discover ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati 60 ဆူဇူကီး AN 650 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Brammo Enertia Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Moto Guzzi 1000 Daytona Injection KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Ducati Diavel